ဗွိုင်ယေဂျာ ရွှေဓာတ်ပြားတွင် ပါရှိသည့်အကြောင်းအရာများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗွိုင်ယေဂျာ ရွှေဓာတ်ပြားတွင် ပါရှိသည့်အကြောင်းအရာများ
ဗွိုင်ယေဂျာ ရွှေဓာတ်ပြားပေါ်ရှိ အသံနှင့် ရုပ်ပုံများတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:ဗွိုင်ယေဂျာ ရွှေဓာတ်ပြားပေါ်ရှိ အသံနှင့် ရုပ်ပုံများ
ဗွိုင်ယေဂျာ ရွှေဓာတ်ပြား၏ အဖုံး
ဗွိုင်‌ယေဂျာ ရွှေဓာတ်ပြား တွင် ဝေလငါး၊ လင်းပိုင်နှင့် ငှက်အပါအဝင် တိရစ္ဆာန်အသံများ၊ မိုးချုန်းသံ၊ ကမ်းစပ်အား ပင်လယ်လှိုင်း ရိုက်ခတ်သံ၊ လေသံ၊ ကဲ့သို့သော သဘာဝအသံအမျိုးမျိုးနှင့် ပုံရိပ်ပေါင်း ၁၁၆ မျိုးပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ရွှေဓာတ်ပြား ကို အာကာသယာဉ် ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ နှင့် ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ နှစ်စီးလုံးတွင် သယ်ဆောင်သွားသည်။ ဒါ့အပြင် မတူညီသည့် ခေတ်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများမှ ရွေးချယ်ထားသည့် ဂီတအင်္ဂါရပ်များ၊ ဘာသာစကား ငါးဆယ့်ကိုးမျိုး ဖြင့်ပြောကြားထားသော နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ၊ (ကားလ် ဆေဂန် ၏) ရယ်မောသံနှင့် ခြေသံများ ကဲ့သို့သော အခြားလူသားအသံများ၊သမ္မတ ဂျင်မီ ကာတာနှင့် ကုလသမ္မဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကွတ် ဝေါလ်ဟိုင်း တို့၏ ပုံနှိပ်ထားသော သတင်းစကားများလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်း အချက်အလက်များကို ကော်နဲလ် တက္ကသိုလ်မှ ကားလ် ဆေဂန် ကသဘာပတိပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီဖြင့် နာဆာအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
နာဆာ မှ ဝေဖန်မှုများကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက်၊ ဆေးဂန် နှင့် သူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ ထည့်သွင်းထားသည့် (မိန်းမနှင့် ယောက်ျားတို့၏ အဝတ်ဗလာ ကောက်ကြောင်း) ပုံကို အေဂျင်စီမှ ရွေးချယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ၎င်းအစား စုံတွဲ၏ အရိပ်ပုံသာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
အောက်ပါသည် နေအဖွဲ့အစည်းပြင်ပ ခရီးစဉ်အတွက် အာကာသယာဉ် ဗွိုင်ယေဂျာတွင် ပါရှိသည့် သမ္မတ ကာတာ ၏ တရားဝင် ဖော်ပြချက်ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဇွန်လ၊ ၁၆၊ ၁၉၇၇
ဤအမှာစကားကို အာကာသထဲသို့ လွှတ်တင်ခဲ့သည်... Milky Way galaxy ထဲရှိ ကြယ်စုပေါင်း ၂၀၀ ၏ အချို့ -စာပိုဒ်များစွာ - ဝေးကွာသည့် ခေတ်မှီလူမှု အဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် အ​ခြေချနေထိုင်နိုင်သည့် ဂြိုဟ်များရှိနေနိုင်သည်။ ခေတ်မှီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက ဗွိုင်ယေဂျာကို ကြားဖြတ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဤမှတ်တမ်းကို နားလည် သဘောပေါက်ပါက ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ အမှာစကားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသံတွေ၊ သိပ္ပံပညာရပ်တွေ၊ ပုံရိပ်တွေ၊ ဂီတတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးတွေ သည် သေးငယ်ပြီး ဝေးလံသော ကမ္ဘာမှလက်ဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကို အသက်ရှင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေကျရသည် ဒါကြောင့် သင်တို့၏။ နဂါးငွေ့တန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ခေတ်မှီလူမှု အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ဖို့ ရှိနေသည့် အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့် တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်ကို မျှော်လင့်နေပါသည်။ ဤမှတ်တမ်းသည် ကျယ်ပြောလှသည့် ကျွန်တော်တို့ စေတနာနှင့် အံ့အားသင့်စရာ စကြာဝဠာ၊ ကျွန်တော်တို့၏စိတ်ဓာတ်၊ ကျွန်တော်တို့၏ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ပထမအပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ကွတ် ဗားလ်ဒ်ဟိုင်း (Kurt Waldheim) မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဖြင့်ပြောကြားထားသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပါဝင်သည်။
ဒုတိယအပိုင်းတွင် ဘာသာစကား ၅၅ မျိုးဖြင့်ပြောကြားထားသော နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများပါဝင်သည်။ မူလ အစီအစဉ်မှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများပြောဆိုရန်ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးမျိုးသော အခက်အခဲ များကြောင့် နိုင်ငံခြားဘာသာစကား ဌာနများမှ လူများဖြင့် ကော်နဲလ် တက္ကသိုလ်တွင် အသံသစ်သွင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤဘာသာစကား ၅၅ မျိုးရှိသည့် (မိခင်စကားမဟုတ်ဘဲ ဒုတိယဘာသာစကားပြောသူများ မပါဝင်) မိခင်ဘာသာစကားပြောသူ အရေအတွက်သည် လူဦးရေသန်း (၄,၇၀၀) ကျော်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၆၅% ကျော်ရှိသည်။ တရုတ်မျိုးကွဲ ၄မျိုးအပါအဝင် (အမှတ်အသား **)၊ တောင်အာရှ ဘာသာစကား ၁၂မျိုး (အမှတ်အသား #)၊ ရှေးကျသည့် ဘာသာစကား ၅မျိုး ( အမှတ်အသား §) တို့ပါဝင်သည်။ အောက်၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အက္ခရာစဉ်ပုံစံဖြင့် စာရင်းပြုထားခြင်းကို ဖော်ပြထား၏။
အာရပ် (Modern Standard)
နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် ကမ္ဘာသုံး ဘာသာစကား နှင့် !Kung အပါအဝင် ဘာသာစကားလေးမျိုးဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်သထားသည်။ ဝေလငါး အသံများကို Roger Payne မှ စီစဉ်သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအသံဖိုင်များကို ရှေ့နောက်ပါဝင်မှုအစီအစဉ်အရ စာရင်းပြုစုထားသည့် ဇယားဖြစ်သည်။
2 0:00:00 Sumerian David L. Owen 𒁲𒈠𒃶𒈨𒂗 šilim-ma hé-me-en May all be well
2 0:00:04 Ancient Greek Frederick M. Ahl Οἵτινές ποτ᾿ ἔστε χαίρετε! Εἰρηνικῶς πρὸς φίλους ἐληλύθαμεν φίλοι. (Hoitines pot'este chairete! Eirēnikōs pros philous elēlythamen philoi.) Greetings to you, whoever you are. We come in friendship to those who are friends.[n ၁]
2 0:00:22 ရုရှား Maria Rubinova Здравствуйте! Приветствую Вас! (Zdrávstvuyte! Privétstvuyu Vas!) Greetings! I Welcome You!
2 0:00:25 ထိုင်း Ruchira Mendiones สวัสดีค่ะ สหายในธรณีโพ้น พวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน (Sàwàtdee kâ, sàhăai nai torránee póhn. Pûak rao nai torránee née kŏr sòng mít jìt maa tĕung tâan túk kon) Hello friends from farland. We in this land have sent you warm greeting to you all
2 0:00:42 ပြင်သစ် Alexandra Littauer Bonjour tout le monde အားလုံး မင်္ဂလာပါ။
2 0:00:45 မြန်မာ Maung Myo Lwin နေကောင်းပါသလား (Naykaungg parsalarr?) နေကောင်းပါသလား
2 0:00:48 Hebrew David L. Owen שלום Shalom Peace
2 0:01:08 ဘင်္ဂါလီ Subrata Mukherjee নমস্কার, বিশ্বের শান্তি হোক (Nômośkār, biśśēr śānti hōk) Hello! Let there be peace everywhere
2 0:01:11 လက်တင် Frederick M. Ahl Salvete quicumque estis; bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus Greetings to you, whoever you are; we have good will towards you and bring peace across space
2 0:01:24 ဂျာမန် Renate Born Herzliche Grüße an alle Warm greetings to everyone
2 0:01:37 ဗီယက်နမ် Trần Trọng Hải Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu Sincere greetings to you
2 0:01:45 ဂျပန် Mari Noda こんにちは。お元気ですか？ Konnichiwa. O genki desu ka? Hello. How are you?
2 0:02:19 ကိုရီးယား Soon Hee Shin 안녕하세요 (Annyeong haseyo) Hello (literally "Are you peaceful?" or "Be peaceful")
2 0:04:18 အင်္ဂလိပ် Nick Sagan Hello from the children of planet Earth Hello from the children of planet Earth
"ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အသံများ"ဖိုင်တွင် ဤအရာများပါဝင်သည်။
မီးတောင်၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မိုးချုန်းသံ
လေ၊ မိုး၊ ကမ်းခတ်လှိုင်း
ငှက်၊ Hyena၊ ဆင်၊ ဝေလငါး
ခြေနင်းသံ၊ နှလုံးခုန်သံ၊ ရယ်မောသံ (ဆေးလ်ဂန်)
သိုးအုပ်၊ Blacksmith၊ လွှဆွဲသံ
မောစ်အချက်ပြသင်္ကေတ၊ သင်္ဘော (သင်္ဘော ဟွန်းသံ))
ထွန်စက်၊ ဘတ်စ်ကား၊ ကား
ပျံသန်းနေသည့် F-111 Saturn V Lift-off (အပိုလို ၁၅)
နမ်းခြင်း၊ မိခင်နှင့် ကလေး
Life Signs၊ ပါလဆာ
ရွှေမှတ်တမ်း၏ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အသံများ အပိုင်းနှင့်အတူ မောစ်အချက်ပြသင်္ကေတတွင် per aspera ad astra ဟုစေ့ဆော်ထားသည့် အမှာစကားပါဝင်သည်။ လက်တင်ဘာသာစကားအရ 'ကြယ်တွေဆီသို့ အခက်အခဲများ ကျော်ဖြတ်၍'ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
ယဉ်ကျေးမှုများစွာမှ ရွေးချယ်ထားသည့် ဂီတ အပါအဝင် အနောက်တိုင်းနှင့် အရှေ့တိုင်း ဂန္တာဝင်ဂီတများ၏ မိနစ်ကိုးဆယ်ကြာမြင့်သည့် ဤအပိုင်းတွင် အောက်ပါအရာများပါဝင်သည်။ 
ဂျာမနီနိုင်ငံ Brandenburg Concerto No.2in F Major, BWV 1047: I. Allegro Johann Sebastian Bach Karl Richter
(conductor) featuring Karl-Heinz Schneeberger (violin) || မြူးနစ် တွင်တေးသံသွင်း၊ ဂျာမနီ၊ January 1967 ၁၉၆၇၊ ဇန်နဝါရီ
ဂန္ထဝင်ဂီတ / Baroque ဂီတ ၄:၄၀
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Puspåwårnå (Kinds of Flowers) Mangkunegara IV Pura Paku Alaman Palace Orchestra/K.R.T. Wasitodipuro (director) featuring
Niken Larasati and Nji Tasri (vocals) || Recorded by Robert E. Brown in Yogyakarta, Java, Indonesia, on January 10, 1971 || ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ / Gamelan || 4:43
ဘီနင်နိုင်ငံ Cengunmé Traditional Mahi musicians of Benin Recorded by Charles Duvelle in Savalou, Benin, West Africa, January 1963 ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ / Percussion 2:08
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ Alima Song Traditional Mbuti of the Ituri Rainforest Recorded by Colin Turnbull and Francis S. Chapman in the Ituri Rainforest of the Democratic Republic of Congo, circa 1951 ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ 0:56
ဩစတေးလျနိုင်ငံ Barnumbirr (Morning Star) and Moikoi Song Traditional Tom Djawa (clapsticks), Mudpo (digeridoo), and Waliparu (vocals) Recorded by Sandra LeBrun Holmes at Milingimbi Mission on Milingimbi Island, off the coast of Arnhem Land, Northern Territory, Australia, 1962 ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ /
Indigenous music of Australia || 1:26
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ El Cascabel (The Bell) Lorenzo Barcelata Antonio Maciel and Los Aguilillas with Mariachi México de Pepe Villa/Rafael Carrión (conductor) Recorded
1957, Musart Records
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Johnny B. Goode Chuck Berry Chuck Berry (vocals, guitar) with Lafayette Leak (piano), Willie Dixon (bass), and Fred Below (drums)
Recorded at Chess Studios, Chicago, Illinois, on January 6, 1958
Rock and roll 2:03
ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ Mariuamangɨ Traditional Pranis Pandang and Kumbui (mariuamangɨ) of the Nyaura Clan Recorded by Robert MacLennan in the village of Kandɨngei, Middle Sepik, Papua New Guinea, on July 23, 1964 ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ 1:20
ဂျပန်နိုင်ငံ / အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Sokaku-Reibo (Depicting The Cranes In Their Nest) Arranged by Kinko Kurosawa Goro Yamaguchi (shakuhachi) Elektra Entertainment ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ /Honkyoku 4:51
ဂျာမနီနိုင်ငံ / ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ Partita for Violin Solo No.3in E Major, BWV 1006: III. Gavotte En Rondeau Johann Sebastian Bach Arthur Grumiaux (violin)
Recorded in Berlin, Germany, November 1960, Decca Music Group Limited
ဂန္ထဝင်ဂီတ / Baroque music 2:55
Austria / Germany The Magic Flute (Die Zauberflöte), K. 620, Act II: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (Hell's Vengeance Boils In My Heart) Wolfgang
Amadeus Mozart || Bavarian State Opera Orchestra and Chorus/Wolfgang Sawallisch (conductor) featuring Edda Moser (soprano) || Recorded in Munich, Germany, August 1972
ဂန္ထဝင်ဂီတ / Opera / Singspiel 2:55
Georgia Chakrulo Traditional Georgian State Merited Ensemble of Folk Song and Dance/Anzor Kavsadze (director) featuring Ilia Zakaidze (first tenor)
and Rostom Saginashvili (second tenor) || Recorded at Melodiya Studio in Tbilisi, Georgia || ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ / Choral music]] || 2:18
ပီရူးနိုင်ငံ Roncadoras and Drums Traditional Ancash Jose Maria Arguedas (Casa de la Cultura) in the Ancash Region of Peru, 1964 ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ 0:52
US Melancholy Blues Marty Bloom and Walter Melrose Louis Armstrong and His Hot Seven Recorded in Chicago, Illinois, on May
Azerbaijan S.S.R. Muğam (Çahargah ahəngi) Traditional balaban) Recorded by Radio Moscow, circa
1950 || ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ || 2:30
ဆိုဗီယက်ယူနီယံ / US The Rite of Spring (Le Sacre Du Printemps), Part II-The Sacrifice: VI. Sacrificial Dance (The Chosen One) Igor Stravinsky]]
Columbia Symphony Orchestra/Igor Stravinsky (conductor) || Recorded at the Ballroom of the St. George Hotel, Brooklyn, New York, on January 6, 1960
Modern ဂန္ထဝင်ဂီတ / Ballet 4:35
Germany / ကနေဒါနိုင်ငံ / US The Well-Tempered Clavier, Book II, Prelude and Fugue in C major, BWV 870 Johann Sebastian Bach Glenn Gould (piano)
Recorded at CBS 30th Street Studio in New York City on August 8, 1966 || ဂန္ထဝင်ဂီတ / Baroque music || 4:48
Germany / ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ Symphony No.5in C minor, Opus 67: I. Allegro con brio Ludwig van Beethoven [[Philharmonia
Orchestra]]/Otto Klemperer (conductor) || Recorded at Kingsway Hall, London, on October 6, 1955
ဂန္ထဝင်ဂီတ / Romantic music 7:20
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ Izlel E Delyo Haydutin Traditional Valya Balkanska (vocal), Lazar Kanevski, and Stephan Zahmanov (kaba gaidi) Recorded by Martin Koenig and Ethel Rain in Smolyan, Bulgaria, 1968
ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ || 4:59
US Navajo Night Chant, Yeibichai Dance Traditional Ambrose Roan Horse, Chester Roan, and Tom Roan Recorded by Willard Rhodes in Pine Springs, Arizona, Summer 1942 ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ 0:57
UK The Fairie Round Anthony Holborne Early Music Consort of London/David Munrow (director) Recorded at Abbey Road Studios, London, September
ဂန္ထဝင်ဂီတ / Renaissance music 1:17
ဆော်လမွန်အိုင်းလန်းနိုင်ငံ Naranaratana Kookokoo (The Cry of the Megapode Bird) Traditional Maniasinimae and Taumaetarau Chieftain Tribe of Oloha and Palasu'u Village Community in Small Malaita Recording of Solomon Islands Broadcasting Services (SIBS) ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ 1:12
ပီရူးနိုင်ငံ Wedding Song Traditional Performed by young girl of Huancavelica Recorded by John and Penny Cohen in Huancavelica, Peru, 1964 ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ 0:38
တရုတ်နိုင်ငံ Liu Shui (Flowing Streams) Bo Ya Guan Pinghu (guqin) Recording of Smithsonian Folkways Recordings ကျေးလက်ရိုးရာဂီတ 7:37
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Bhairavi: Jaat Kahan Ho Traditional harmonium,Tanpura and tabla accompaniment Recorded in မွန်ဘိုင်း၊ အန္ဒိယ၊ ဧပြီ ၁၉၅၃ Hindustani Shastriya Sangeet (Indian ဂန္ထဝင်ဂီတ) 3:30
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Dark Was the Night, Cold Was the Ground Blind Willie Johnson Blind Willie Johnson (slide guitar, vocals) Recorded in Dallas, Texas, on
ဂျာမနီ / ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ / US String Quartet No. 13 (Beethoven): in B-Flat Major, Opus 130: V. Cavatina Ludwig van Beethoven Budapest String Quartet Recorded at the
Library of Congress, Washington, D.C., on April 7, 1960
ဂန္ထဝင်ဂီတ / Romantic music 6:37
Beatles အဖွဲ့၏ Abbey Roadအလ်ဘမ်မှ "Here Comes the Sun"တေးသီချင်းကို ပါဝင်ရန် ဆေးလ်ဂန်မှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့သည်ဟုဆိုထားသည်။ သို့သော် Beatlesက ကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်း
မပါဝင်ခဲ့သည့်တေးဂီတများနှင့် ၎င်းကို EMIက ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆေးလ်ဂန်နှင့်အတူ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့သော
Timothy Ferris ပြောကြားသည်မှာ သူသည် သီချင်းကို ဘယ်တုန်းကမှ ထည့်သွင်းရန်မစဉ်းစားခဲ့ဟု ဆိုသည်။
↑ Somewhat loose translation; per NASA.
↑ Sagan၊ Carl (1994)။ Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (1st ed.)။ New York: Random House။ ISBN 9780679438410။
↑ Traveller's Tales [Carl Sagan Tribute Series, S01E16]။ February 10, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Lafrance၊ Adrienne (30 June 2017)။ Solving the Mystery of Whose Laughter Is On the Golden Record။ The Atlantic။ 1 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Howdy, Strangers။ NASA။ 19 March 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ November 10, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Voyager Spacecraft Statement by the President.။ The American Presidency Project။ November 10, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Greetings to the Universe in 55 Different Languages။ NASA။ September 6, 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Story Behind ‘Greetings to the Universe,' the 55 Recordings of 'hello' Sent Into Space (2015-08-06)။ 21 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Voyager(Languages): Armenian။ August 24, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gambino၊ Megan (April 23, 2012)။ What Is on Voyager's Golden Record?။ Smithsonian Magazine။ 27 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Voyager: Greetings in 55 languages။ March 14, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Voyager Interstellar Record – 3/31 UN Greetings Whale Greetings။ February 10, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sagan၊ Carl (1978)။ Murmurs of Earth: The Voyager Interstellar Record။ ISBN 0345315367။
↑ Sternberg၊ Janet (29 Apr 2013)။ [Armenian Voyager Golden Record greetings by Araxy Terzian]။ Twitter။ 17 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Voyager – Spacecraft – Golden Record – Sounds of Earth။ NASA။ August 17၊ 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ozmarecords။ Voyager။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ Ferris၊ Timothy (2017-08-20)။ [https://www.newyorker.com/tech/elements/voyager-golden-record-40th-anniversary-timothy-ferris How the Voyager Golden Record Was Made]။ The New Yorker။ 2017-12-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [http://www.ozmarecords.com/voyager The Voyager Golden Record: Audio Tracklist]။ Ozma Records။
↑ Linich၊ Carl (19 March 2008)။ Ilia Zakaidze။ Georgian Folk Singing။9October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [https://www.youtube.com/watch?v=dyP3sgnnOXo Voyager 1977 - Georgian folk song "Chakrulo" in space - "ჩაკრულო" კოსმოსში] (in Georgian)။ Youtube (interview with Anzor Erkomaishvili and others)။9October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗွိုင်ယေဂျာ_ရွှေဓာတ်ပြားတွင်_ပါရှိသည့်အကြောင်းအရာများ&oldid=746555" မှ ရယူရန်
Akkadianဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Hittiteဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Aramaicဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Classical Syriacဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
တောင်ပိုင်း ဆိုသိုဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Wu Chineseဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Ilaဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Gujaratiဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
အိုရီရာဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဂန်ဒါဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Marathiဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Min Nan Chineseဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Teluguဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Kannadaဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၆:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။